Cade Muuse oo shir saxaafadeed qabtay Maanta | maakhir.com
Cade Muuse oo shir saxaafadeed qabtay Maanta
Garoowe:- Madaxwaynaha Maamulka Puntland Cade Muuse ayaa saaka hiirtii waa bari shir saxaafadeed ku qabtay Xarunta Mataxtooyada ee magaalada Garoowe Shirkaas ayaa waxa Cade Muuse kaga hadlayay xaaladah Amaan ee guud ahaan Maamulka Puntland iyo waliba sicir bararka baahsan ee ku dhuftay Gobolada Puntland la baxay.
Cade Muuse Xirsi ayaa waxa carabka ku dhuftay inay rabshadaha is daba jooga haa ee ka dhacay gudaha Maamulka Puntland ay ka danbeeyaan Gacamo shi sheeye iyo walib kooxa uu ugu yeedhay waxma garato kuwaasi oo Cade Musue sheegay inay ka mid yihiin xukuumada laftigeeda.
Cadde Muuse wuxuu eedeeyn balaaran usoo jeediyey dowlado uusan carabka ku dhufan ,oo uu sheegay in ay door muuqda ka qaataan sidii xidida loogu sii bilahaa amaanka dowlad gobaleedka Puntland ,balse wuxuu sheegay in aysan taasi dhaceyn.
Cade Muuse waxa uu shirkiisaa ku soo qaatay sara u kaca Doolarka isaga oo sheegay inay sabab u yihiin warshadaha Lacagta faalisadaha daabaca kuwaasi oo uu sheegay inay ku yaaliin gudaha maamulka Puntland.
Dhanka kale waxa uu sheegay Cad Muuse inay jiraan kooxo xidhiidh dhaw la leh Al-Shabaab iyo Asmara ay joogaan qaybo ka mid ah Gobolada Puntland kuwaasi oo doonaya buu yiri inay fowda ka abuuraan deeganadaasi.
hadalka Cade Muuse ayaa ku soo beegmaya xili ay Gobolada Puntland ka jiraan Falal Amaan xumo ah iyo wali Sicir barar baahsan,taasi oo shacabka oo dhami ay Farta ku soo fiiqayaan inay ka danbeeyaan Maamulka Cade Muuse.
« Wiil uu dhalay Usaama oo sheegay inuu wado Fariin Nabad ah
Wafti Xaqiiqa raadi ah ayaa gaadhay Magaalada Kismaayo ee Xarunta G/ Jubada Hoose »